Archive du 04/05/2012
Raharaha Free FM
Nivadika ny rasa
Tsy lasa lavitra ny fitorian�Atoa Mamy Ravatomanga an�ireo mpanao gazety roa, Lalatiana Rakotondrazafy sy Fid�le Razarapiera miandraikitra ny fandaharana "Anao ny fitenenana" ao amin�ny onjampeo Free FM, satria navotsotry ny zandarimariam-pirenena, omaly tolakandro izy ireo ary tsy nalefa teny amin�ny fampanoavana ny raharaha.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Razafiandriambelo Njato Harinony
Nokianin�ireo CT namany ny fomba fitantanany ny fivoriana
Tsy hahatratra ny 26 jona ?
Tena miha mahery vaika ny fitakiana isan-tsokajiny eto amin�ny firenena amin�izao fotoana.
Jeneraly Ravalomanana Richard
�Esory aho rehefa manelingelina e !�
Raha nisy ny olo-malaza sy matetika voatonona anarana anatin�ny filazam-baovao na adihevitra etsy sy eroa, tato anatin�izao tetezamita izao dia anisan�ny lohalaharana amin�ireny ny jeneraly Ravalomanana Richard. Lehiben�ny fari-piadidian�ny zandarimariam-pirenena Faritany Antananarivo moa izy amin�izao fotoana ary lehiben�ny Emmo-Reg. Maro be ny resaka etsy sy eroa momba azy sy ny fomba fiasany, ka izay indrindra no antony nifampiresahan�ny Tia Tanindrazana taminy, mba hamantarana ny zava-misy marina sy ny heviny manodidina ny tranga maro samihafa nanintona ny sain�ny mpanara-baovao ireny. Araho ary ny sokela nifanaovana taminy.
Ravelomanarivo Jean Jacques, lefitry ny Pr�fet de police
�Rehefa tsy nahazo ireo teo aloha dia tsy mahazo koa ny rehetra aty aoriana�
Nahabe resaka hatramin�ny faran�ny herinandro ny fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso nataon�ny Emmo-Reg nanaparitahana ny vahoaka tonga teny Ambohijatovo raha saika hanao tatitra ny Parlemantera avy amin�ny Ankolafy Ravalomanana . Nanatona ny prefektiora hanontaniana ny heviny sy ny anjara andraikiny momba ny fanakanana ilay hetsika izahay. Ravelomanarivo Jean Jacques, lefitry ny Pr�fet de police no nandray ny gazety Tia Tanindrazana.
Mitohy ny fitokonana
Niakatra ny maripanan�ireo mpampianatra mpiasam-panjakana sy mpampianatra FRAM ao Amoron�i Mania ka niray feo fa hanakatona ireo sekolim-panjakana mbola nisokatra hatramin�izay.
�Aty aminay ny vahoaka�
Tsy iadian-kevitra fa maro an�isa ao amin�ny Parlemanta ny mpomba an-dRajoelina.
Naza Electronic Tsaralalana
Nipoahan�ny baomba vita gasy omaly
Nahitana fipoahana baomba vita gasy indray omaly tokalandro tokony ho tamin�ny roa ora tany ho any, teo amin�ny Naza Electronic Tsaralal�na, tranombarotra tantanan�ny Karana.
Fahalalahan�ny asa fanaovan-gazety
Tsy mbola tanteraka
Tao Toliara renivohitry ny Faritra Atsimo Andrefana no nampiantrano ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an�ny fahalalahan�ny asa fanaovan-gazety.
Hivoaka anio ny didim-pitsarana
Hafanafana indray ny tan�nan�Antsirabe amin�ity anio ity noho ny raharaha TIKO.
Mirehitra ny afo
Mifarana ity ny herinandro voalohany amin�ny volana mey, volana fahadimy amin�ity taona ity, saingy mbola ankamantatra ny hisian�ny tena fitoniana eto amin�ny tany sy ny fanjakana.